Outlook ပြုပြင်ရေးကိရိယာ။ Outlook က Recovery ကို software ကို။ PST ပြုပြင်ရေးကိရိယာ။
DataNumen Outlook Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာပေါ်တွင် Outlook ပြုပြင်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ၎င်းသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရှိသော Outlook PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပြီးအီးမေးလ်များ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ချိန်းဆိုမှုများ၊ အလုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ ဂျာနယ်များ၊osts ၌စသည်တို့ကိုဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှအားဖြင့်ဖိုင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတွက်ဆုံးရှုံးမှုကို minimize ။
DataNumen Outlook Repair ယခင်ကဟုခေါ်သည် Advanced Outlook Repair.
ဘို့ OST ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးနှင့် OST PST ဖိုင်ပြောင်းရန် ကျေးဇူးပြု၍ သုံးပါ DataNumen Exchange Recovery.
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး Outlook ကပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးသောစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen Outlook Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ထဲရှိ Inbox Repair tool (scanpst) နှင့်အခြား PST ပြုပြင်ရေးကိရိယာများအပါအ ၀ င်အခြားပြိုင်ဖက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Outlook Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်က Windows ကိုမွမ်းမံပြီးတာနဲ့ Outlook အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ငါသုံးခဲ့တယ် datanumen အီးမေးလ်ကိုပြန်လည်စီစဉ်ရန်ထုတ်ကုန်
ကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်က Windows ကိုမွမ်းမံပြီးတာနဲ့ Outlook အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ငါသုံးခဲ့တယ် datanumen အီးမေးလ်ဖိုလ်ဒါများကိုစနစ်တကျပြန်လည်စီစဉ်ရန်ထုတ်ကုန်သည်၎င်းအလုပ်လုပ်သည်။ ဒေတာများကိုပြုပြင်ရန်၊ ဒေတာဖိုင်အမည်ပြောင်းပြီး Outlook ကို run ရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။ Presto ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 20, 2020
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဖိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်တော်သဘောကျမိသည်။ အားလုံးတော့ငါအဲဒါကိုမလိုတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖိုင်နှစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ငါဖျက်လိုက်တယ်
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဖိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်တော်သဘောကျမိသည်။ အားလုံးတော့၊ အဲဒါကိုမလိုတော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် file recovery နှစ်ခုကိုပြီးသွားပြီ။
Leioa, Bizkaia, စပိန်
ငါသည်သင်တို့၏ Outlook ကိုပြုပြင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 21, 2020
စက်တင်ဘာလ 1st, 2020
ဒီကုမ္ပဏီကြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Datanumen Outlook repair ထုတ်ကုန်!
ကျွန်ုပ်၏ Outlook (Companion Link) နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနှင့်ပရိုဂရမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာရှိကျွန်ုပ်၏ဒေတာအသစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှအဟောင်းဒေတာများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာ Outlook ဖိုင်ကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိဘဲမှတ်စုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတိုင်း (ယခင်ဗားရှင်း, အခြားပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ, အခြားအွန်လိုင်းအကြံပေးချက်များ) မှတဆင့်ဤနည်းလမ်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းရှာဖွေစဉ်းစားခြင်းနှင့်ရှာဖွေနေစုံတွဲတစ်တွဲလုံးရက်ပေါင်းတော်တော်များများအားလုံးအကုန်လုံးနှင့်မဖြစ်နိုင်သလိုပဲ, ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကတွေ့ရှိခဲ့ Datanumen ထုတ်ကုန်နှင့်ဌပြုပြင် / ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်ost မှတ်စုများ! အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခက်ခဲသောအချိန်အချို့ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရစဉ်ကျွန်ုပ်၏မျှော်မှန်းချက်အချက်အလက်များကိုထိုအမှားဖြင့်ထပ်မံကူးယူထားပြီးပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဤရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုအလွန်ကျေနပ်မိသည်။ Datanumen ကျွန်တော့်ရဲ့ဒေတာကိုပြန်လည်ရယူဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုပါ။ ဒီဟာကအံ့သြစရာကောင်းပြီးဆော့ဗ်ဝဲဟာအလိုလိုသိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပဲ။ လူတွေအနေနဲ့လူတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ် !!!
Los Angeles မြို့,, CA, USA
ဇူလိုင်လ 17th, 2020
ကျွန်ုပ်၏ Microsoft ဖိုင်ကို "corrupt" ဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောကျွန်ုပ်၏အခြားဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ yo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သန်း
စိန့် Albans ။ ဗြိတိန်
ဇူလိုင်လ 9th, 2020
Sheer magic - scanpst.exe သည် Outlook Mailbox အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုနိုင်သောဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုသာပြုပြင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇွန်လ 2nd, 2020
ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပူဇော်ချင်ပါတယ် DataNumen inc ။ သင်၏အကူအညီနှင့်အတွေ့အကြုံနည်းသောလူကိုခွင့်ပြုသည့်သင်၏ဆော့ဝဲလ်အတွက်ဖြစ်သည်
ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပူဇော်ချင်ပါတယ် DataNumen inc ။ သင်၏အကူအညီနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး အားသူ၏ Outlook 2007 PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည့်သင်၏ဆော့ဝဲလ်အတွက်ဖြစ်သည်။
Calgary, AB, ကနေဒါ
မေလ 8th, 2020
အငြိမ်းစား GE Lighting
သြဂုတ်လ 8th, 2019
မင်းရဲ့ရက်ရောစွာကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသေချာပေါက်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
မေလ 31, 2019
ဤသတင်းစကားသည်သင်၏တောက်ပသော Outlook ပြုပြင်ရေးကိရိယာအတွက်သင့်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်သည်ပြတ်တောက်မှုများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်
ဤသတင်းစကားသည်သင်၏တောက်ပသော Outlook ပြုပြင်ရေးကိရိယာအတွက်သင့်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည် Outlook pst ကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်စေသောလျှပ်စစ်ပြတ်လပ်မှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Scanpst သည် disk ပြproblemsနာများကိုရည်ညွှန်းသည့်အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါသည်ဤအမှား googled နှင့်ကံကောင်းတာကသင်၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ထိမိ။ လဲ။ ငါ install လုပ်ပြီး2နာရီကျော်ယူသော tool ကိုပွေးလေ၏။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သော Outlook ဖြစ်ပြီးယခင်ကထက်များစွာမြန်ခဲ့သည်။ အီးမေးလ်ကိုအားကိုးအားထားပြုရသည့်စီးပွားရေးအကောင့်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည်လကိုကျော်သွားပြီ။
အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိုင်တီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
dual-core cpu၊ 4Gb ram၊ Windows7professional နှင့် Outlook 2007 ပါသော Desktop pc (ဟောင်းမော်ဒယ် IBM) ။ 4.5Gb
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2019
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2019
MS Office အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုပျက်စီးစေပြီးကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်ပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းရပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Outlook ကအဟောင်းကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးost
MS Office အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုပျက်စီးစေပြီးကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်ပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းရပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Outlook ကအဟောင်းကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးost ဖိုင်နဲ့ငါဌost ငါ့ရဲ့အီးမေးလ်တွေအားလုံးကိုဖိုင်တွဲငယ်များ (ဒေသခံကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်း) ထဲမှာသိမ်းထားတယ်။ ၎င်းသည်ဆာဗာပေါ်တွင်ဖိုင်တွဲငယ်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်မဟုတ်ပါ။ ၆ နာရီကြာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးနောက်၊ ငါသည်သင်တို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတွေ့ပြီးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ မိနစ် ၃၀ မပြည့်မှီတွင်အားလုံးပြန်လည်ကောင်းလာပြီ။ အီးမေးလ်များအားလုံးလုံခြုံပြီးလက်လှမ်းမီသည်။
ငါ၏အ outlook.pst ဖိုင်ကိုစနစ်တကျပိတ်ထားခြင်းမရှိသောအဆက်မပြတ်အမှားအယွင်းများကြောင့်သင်၏ Outlook ပြုပြင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်၏ outlook.pst ဖိုင်နှင့်ပတ်သက်သောအဆက်မပြတ်အမှားမက်ဆေ့ခ်ျများကြောင့်နောက်ဆုံးအသုံးချမှုတွင်စနစ်တကျပိတ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်၏ Outlook ပြုပြင်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုကျွန်ုပ် download လုပ်သည်။ သငျသညျ software ကိုperfectlyုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ pst ဖိုင်သည် ၁.၉ gb မှ 1.9gm သို့ 'l' နှင့်ကြီးထွားလာသည်ost ငါ့ကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်နှင့်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်ပြန်လည်ထည့်သွင်းထားသောဖိုင်တွဲနှစ်ခုထဲသို့ (ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်သေတ္တာထဲမှစွန့်ပစ်ခြင်းမဟုတ်သော) အချက်အလက်များကို '။ ဆယ်မိနစ်မပြည့်မီပြန်လည်ရယူထားသော mail ပစ္စည်းများပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ၁၀ မိနစ်ကြာသည်။
နောက်တဖန်ငါပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲကပြောပါတယ်အရာလုပ်ထိုကဲ့သို့သောကောင်းသော software ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤအသုံးပြုသူကိုကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများ tool ကိုသေတ္တာအဘို့ဤအကြံပြုသည်။
ဇြန္လ 27, 2019
အလွန်နက်ရှိုင်းစွာရှုပ်ထွေးပြီးဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေရန်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာဆုပ်ကိုင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်ost အီးမေးလ်များ ငါထင်ပေါ်ကျော်ကြားငွေပမာဏကို recover နိုင်ခဲ့သည်
အလွန်နက်ရှိုင်းစွာရှုပ်ထွေးပြီးဖျက်ပစ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေရန်နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာဆုပ်ကိုင်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်ost အီးမေးလ်များ ငါအသုံးမပြုတဲ့အခြားဆော့ဖ်ဝဲကိုမဆိုနိုင်တဲ့အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီလျှောက်လွှာကို c မပါဘဲသီးသန့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ost.
သြဂုတ်လ 23, 2019
ဒီ software ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဤကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်ကိရိယာတစ်ခုပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။DataNumen Outlook Repair v 1.2 အပြည့်အဝဗားရှင်း)
ဒီ software ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဤကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်ကိရိယာတစ်ခုပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။DataNumen Outlook Repair အများပြည်သူအသုံးပြုရန် v 1.2 အပြည့်အဝဗားရှင်း) ။ သငျသညျ tools တွေကိုဒီကျော်လွန်ပြီးအရာတစ်ခုခုကိုပေးနိုင်လျှင်ငါသိပါစေ။
DATEL စနစ်များနှင့်ဆော့ဝဲလ်များ FZ LLC
ပန်းခြံစီးတီး, Utah, USA
ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါအတောအတွင်းမှာဘာလုပ်ရမှန်းထွက်တွက်ဆ။ ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ost ငါ၏အဌအားလုံးost အီးမေးလ် ထုတ်ကုန်ကောင်းတစ်ခုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Metton America, Inc
ဟူစတန်, TX, USA
ငါနှင့်အတူ DVDRom လက်ခံရရှိခဲ့သည် zippst-file ကို ped ။ ငါကထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီအပေါင်းတို့သည်နောက်တဖန်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ငါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါနှင့်အတူ DVDRom လက်ခံရရှိခဲ့သည် zippst-file ကို ped ။ ငါအဲဒါကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ။ အားလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကြင်နာစွာကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့မင်းငါ့ကိုပေးခဲ့တဲ့အကူအညီတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်နှင့် AOR အတွက်မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်ထဲရှိအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ရော်ဘင် De Roeck
သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
Procter & Gamble မှ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး
ဟိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအီးမေးလ်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကို sort ဖို့စီမံခန့်ခွဲပါပြီ, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုနှောင့်အယှက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ BTW, ထုတ်ကုန်ကိုချစ်။
Batch Repair tab မှာဖိုင်တခုစီရဲ့တည်နေရာနဲ့အမည်ကိုသတ်မှတ်လို့ရသလား။ ဤသည်မှာမည်သည့်အချိန်တွင်ပြုပြင်ရန် tab တွင်ဖြစ်နိုင်သည်
Batch Repair tab မှာဖိုင်တခုစီရဲ့တည်နေရာနဲ့အမည်ကိုသတ်မှတ်လို့ရသလား။ ဤအရာသည်ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုသာလုပ်ဆောင်သည့်အခါ Repair tab တွင်ဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ output file အသေးစိတ်များကိုအသုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်တည်းဖြတ်ပါကအလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
စကားမစပ်ဂရိတ်ထုတ်ကုန်! AOR သည်မီတာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ost အလွန်အရေးကြီးသော 6GB PST ဖိုင်ကနေပစ္စည်းများ၏။ SCANPST နှင့်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ကြိုးပမ်းမှုများမှာ ၅၀၀ မီလီဂရမ်သာပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
Network မှ Manager ကို
CB Richard Ellis လီမိတက်
အချိန်ကောင်းကငါဝယ်သည် Datanumen Outlook Repair ငါနှင့်အတူပျော်ရွှင်မိတယ်၊ အဲဒါကိုအချိန်နဲ့အမျှဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ယခုငါ NSF တစည်းထဲကနေဖျက်ပစ်အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်
အချိန်ကောင်းကငါဝယ်သည် Datanumen Outlook Repair ငါနှင့်အတူပျော်ရွှင်မိသည်၊ ၎င်းကိုအချိန်နှင့်အမျှဖွဲ့စည်းသည်။ NSF Lotus Notes ဖိုင်မှဖျက်လိုက်သောအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်မှာကုန်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Lotus Notes အတွက်ဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူး။ ကောင်းပြီ၊ သင်ကအရာရာကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ပြီးကတည်းကဘာလို့မလုပ်တာလဲ Datanumen NSF ပြုပြင်မလား လေးစားစွာဖြင့်ရောဘတ်တို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလန်, ပြုပြင်ရေး alm အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ost ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ... ငါကောင်းကောင်းမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မင်းဘူး
Helmut Demmelhuber Demmelhuber အတိုင်ပင်ခံ
စက်တင်ဘာ 13, 2018
မင်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် --- အဲဒါကပရိုဖိုင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရုံပဲ။
မေလ 23rd, 2018
ကျွန်ုပ်၏ Outlook အချက်အလက်ဖိုင်သည်ပုံရသည်ostly fixed ။
ငါ entries တွေကိုတစ်တန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်
ငါတစ် entries တွေကိုတစ်တန်စစ်ဆေးရန်နှင့်ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါထင်, ငါ m ပြန်လည်ကောင်းမွန်ost ငါ့ဒေတာ၏။
နaperville, IL, USA
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2018
Brock Croome ဗိသုကာ
မြောက်အမေရိကဗန်ကူးဗား, ဘီစီ, ကနေဒါ
နိုဝင်ဘာ 1st, 2015
Advanced Outlook Repair 19GB Outlook 2007 .pst ကို ၁၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖိုင်တွဲများစွာနှင့်လုံး ၀ ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာခက်ခဲပြီးနောက်အကျင့်ပျက်ဖြစ်လာခဲ့သည်
Advanced Outlook Repair 19GB Outlook 2007 .pst ကို ၁၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖိုင်တွဲများစွာနှင့်လုံး ၀ ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ သူသည် hard shutdown ပြီးနောက်ပျက်စီးသွားပြီး safe mode ၌ပင်ဖွင့ ်၍ မရပါ။ ExpertsExchange.com ပေါ်ရှိ "chcw" မှသင်၏ကိရိယာနှင့်ပြုပြင်မှုရာခိုင်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်မှုဇယားမှကျွန်ုပ်၏ကိရိယာကိုကြားခဲ့ရသည်။ Datanumen.site ။ ငါ .pst ကော်ပီတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ Microsoft scanpst.exe နှင့်ကံမကောင်းစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ တတိယပါတီကိရိယာများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကူညီခဲ့သည် Outlook Express ပြောင်းလဲခြင်းဒီတော့ငါအွန်လိုင်းကြည့်ရှုကြ၏။ Advanced Outlook Repair ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များရရှိခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာများကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကူပွန်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးဝယ်လိုက်သည်။ ပထမ pass သည်မူရင်းဖိုင်ကို reboot လုပ်သည့်တိုင်အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှဖွင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါ ထပ်မံ၍ ၎င်းကိုမိတ္တူကူးရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်း (၂၀% ခန့်) တွင်ကျွန်ုပ်၏ Outlook ပွင့်လင်းလာသည် - ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ဆုံးပေါ်ဖိုင်တွဲများနှင့်အီးမေးလ်များဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကတစ်ခုခုကိုထိမိပြီးပိတ်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့ပဲ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သော
Outlook PST ဖိုင်တွင်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောအမှားများနှင့်ပြFollowingနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်
Inbox Repair Tool သည်ပစ္စည်းများပြန်လည် ရယူ၍ မရပါ
Inbox ပြုပြင်ရေး Tool ကိုချိတ်ဆွဲထားသည်
မမျှော်လင့်သောအမှားတစ်ခုကဤဖိုင်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီးထားသည်။ ScanDisk ကို သုံး၍ အမှားအယွင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ၊ ပြီးနောက် Inbox Repair tool ကိုထပ်မံအသုံးပြုပါ။
ကြီးမားသော PST ဖိုင်ပြproblemနာ (PST ဖိုင်အရွယ်အစားသည် 2GB ပမာဏထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်နိုင်သည်)
encrypt လုပ်ထားသော PST ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်ကိုမေ့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Repair v8.5
Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 နှင့် Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ 32bit နှင့် 64bit operating system နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။
မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊ postsST, ပြက္ခဒိန်များ, ရက်ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များ, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့် PST ဖိုင်တွေထဲမှာမှတ်စုများ။ အကြောင်းအရာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျကိုယ်ထည်၊ စသည်တို့မှ၊ cc, bcc, ရက်စွဲစသဖြင့်ကဲ့သို့သောဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးပြန်လည်ရရှိသည်။
ရိုးရိုးစာသား၊ RTF နှင့် HTML format ဖြင့်အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
ထည့်သွင်းထားသောအရာဝတ္ထုများ၊ အခြားအီးမေးလ်၊ Excel စာရွက်စာတမ်းများ၊ စကားဝှက်စာရွက်စာတမ်းများစသည်တို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှုost Inbox Repair tool (Inbox tool သို့မဟုတ် scanpst.exe ဟုလည်းခေါ်) သည်မအောင်မြင်သောအခြား PST ပြုပြင်ရေးကိရိယာများမပြုပြင်နိုင်သော PST ဖိုင်များ၏။
ပယ်ဖျက်လိုက်သော Outlook ပစ္စည်းများ၊ မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊osts, ပြက္ခဒိန်, ရက်ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ။
ကြီးမားသော 2GB PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
16777216 TB (ဥပမာ 17179869184 GB) ကဲ့သို့ကြီးမားသော PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
စကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသော PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖိအားပေးနိုင်သောစာဝှက်စနစ်နှင့်မြင့်မားသောစာဝှက်စနစ် (သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးစာဝှက်စနစ်) နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ထားသည်။ သင့်တွင်စကားဝှက်မရှိပါက PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
PST ဖိုင်ကို Outlook 97-2002 format မှ Outlook 2003-2019 / Office for 365 format သို့ပြောင်းလဲရန်ပံ့ပိုးမှုနှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့်.
ပုံသေ PST ဖိုင်ကို Outlook 97-2002 format နှင့် Outlook 2003-2019 / Office 365 format အတွက်ထုတ်လုပ်ရန်ပံ့ပိုးသည်။
scanpst နှင့်အခြား PST ပြုပြင်ရေးကိရိယာမှအသိအမှတ်မပြုနိုင်သည့်ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် PST ဖိုင်များမှအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
Outlook PST ဖိုင်များရှိအမှားများကိုမရွှေ့နိုင်ပါ.
Outlook PST / ပြthatနာကိုဖြေရှင်းရန်ပံ့ပိုးမှုOST ဖိုင်သည်နှေးသည် (သို့) တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။
scan, recovery နှင့် output ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဘက်စုံသောခလုတ်များ။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* ။ vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* ။ vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* ။ tib) မှပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှုost ဖိုင်များ (* ။ gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO image ဖိုင်များ (* ။ iso), disk image file (* ။ img), CD / DVD image files (* ။ bin), အရက် 120% Mirror Disk File (MDF) ဖိုင်များ (* ။ mdf) နှင့် Nero image files (* .nrg).
tempo မှ Outlook အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှုrarဒေတာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ Outlook မှဖန်တီးသော y ဖိုင်များ.
floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင် PST ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အကျင့်ပျက် PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
ရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်အရဒေသခံကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် PST ဖိုင်များ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်ပံ့ပိုးမှု။
ဒေသခံကွန်ပျူတာမှအသိအမှတ်ပြုထားသောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသော drives များအပါအ ၀ င်မည်သည့်နေရာ၌မဆို PST ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်tarta PST ပြုပြင်ခြင်းသည် Windows Explorer ၏ဆက်စပ်မီနူးနှင့်လွယ်ကူစွာ။
command line parameters များမှတဆင့်အကျင့်ပျက် PST ဖိုင်ကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Outlook Repair Corrupt Outlook PST ဖိုင်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်
သင်၏ Outlook PST ဖိုင်များပျက်စီးနေသည်သို့မဟုတ်သင် Microsoft Outlook တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကိုမဖွင့်နိုင်သည့်အခါသင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Outlook Repair PST ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဖိုင်များမှအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူရန်။
မှတ်စု: ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် PST ဖိုင်ကိုမပြုပြင်မီ DataNumen Outlook Repairကျေးဇူးပြု၍ Microsoft Outlook နှင့် PST ဖိုင်ကိုပြုပြင်နိုင်သည့်အခြားမည်သည့် application ကိုမဆိုပိတ်ထားပါ။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Outlook PST ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
PST ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာ၌ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် PST ဖိုင်ကိုရှာရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မူလအရင်းအမြစ် PST ဖိုင်၏ Outlook ဗားရှင်းကိုသင်သိပါက၎င်းကို combo box တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည် source file edit box အပြင် Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Office 365 PST ဖိုင်နှင့် Outlook 2013-2019 / Office 365 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ OST ဖိုင်။ အကယ်၍ သင်ပုံစံကို "Auto Determined" ထားခဲ့ရင်၊ DataNumen Outlook Repair အလိုအလျောက်၎င်း၏ format ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရင်းအမြစ် PST ဖိုင် scan လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသည်အပိုဆောင်းအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Outlook Repair ပြန်လည်ရယူထားသောအချက်အလက်များကို xxxx_fixed.pst ဖိုင်အမည်အသစ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် xxxx ရင်းမြစ် PST ဖိုင်အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Outlook.pst အရင်းအမြစ် PST ဖိုင်အတွက်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့်ဖိုင်အတွက်မူရင်း Outlook_fixed.pst ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
combo box ထဲရှိပုံသေသတ်မှတ်ထားသော PST ဖိုင်အမျိုးအစားကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် Fixed file edit box ဘေးတွင်၊ Outlook 97-2002 နှင့် Outlook 2003-2019 / Office 365. ဖြစ်နိုင်သောပုံစံများကိုသင် "Auto Determined" အဖြစ်ထားခဲ့လျှင်၊ DataNumen Outlook Repair local computer ပေါ်တွင် install လုပ်ထားသော Outlook နှင့်လိုက်ဖက်သောပုံသေ PST ဖိုင်ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen Outlook Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ် PST ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ ပြုပြင်ပါ။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးလျှင်မူလအရင်းအမြစ် PST ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါက၊ အောက်ပါစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည် Microsoft Outlook ဖြင့်ပုံသေ PST ဖိုင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ folder တစ်ခုလုံး hierarchy ကိုပုံသေ PST ဖိုင်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးမူလဖိုင်တွဲများထဲသို့ထည့်သည်။ l အတွက်ost & တွေ့ရှိခဲ့အရာဝတ္ထု, သူတို့က Recovered_Groupxxx ဖိုင်တွဲထဲမှာထားလိမ့်မည်။
DataNumen Outlook Repair 8.5 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair 7.9 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair 7.5 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
User Interface ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
DataNumen Outlook Repair 7.2 ကိုဇွန်လ 19, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Outlook Repair 7.1 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair ၃.၂ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊
ရှာဖွေရေး function ကိုတိုးတက်စေ။
DataNumen Outlook Repair 6.8 ကိုဇွန်လ 29, 2019 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ပုံသေ PST ဖိုင်၌ရှေ့နောက်မညီမှုများကိုဖယ်ရှားပါ။
DataNumen Outlook Repair ၃.၂ ကိုမတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Outlook 2019 ကိုထောကျပံ့ပါ။
DataNumen Outlook Repair 5.6 ဇွန်လ 23, 2018 ရက်တွင်ဖြန့်ချိသည်
Office 365 အတွက် Outlook အထောက်အပံ့။
Outlook 2016 ကိုထောကျပံ့ပါ။
DataNumen Outlook Repair 5.3 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
ပယ်ဖျက်၊ လျှို့ဝှက်သို့မဟုတ် l ပြန်ဆယ်တင်ရန်ရှိမရှိထိန်းချုပ်ရန်ပံ့ပိုးမှုost ပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Outlook PST ဖိုင်များရှိ“ အရာဝတ္ထုများကိုရွှေ့။ မရပါ” အမှားကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
DataNumen Outlook Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
64bit Outlook ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
DataNumen Outlook Repair ၁.၆ ကိုAprilပြီ ၁ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ပျက်စီးခြင်းမရှိသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* .vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* .vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* .tib) မှပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှုost ဖိုင်များ (* .gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO image files (* .iso), Disk image file (* .img), CD / DVD image files (* .bin), Alcohol 120% Mirror Disk File (MDF) ဖိုင်များ (* .mdf) နှင့် Nero image files (* .nrg) ။
DataNumen Outlook Repair 4.1 ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Microsoft Outlook 2013 ကိုထောက်ပံ့ပါ။
DataNumen Outlook Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
DataNumen Outlook Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အစီရင်ခံစာ function ကိုတိုးတက်စေ။
DataNumen Outlook Repair 3.0 ကိုမတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
DataNumen Outlook Repair 2.5 ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ဖိုင်ကြီးများကိုခွဲထုတ်ရာတွင် bug တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပါ။
အမှားမက်ဆေ့ခ်ျကို processing အတွက် bug ကို fix ။
DataNumen Outlook Repair ၁.၄ ကိုမေလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Microsoft Windows Vista ကိုထောက်ပံ့ပါ။
Microsoft Outlook 2007 ကိုထောက်ပံ့ပါ။
ကြီးမားသောမက်ဆေ့ခ်ျများ processing အတွက် bug ကို fix ။
DataNumen Outlook Repair ၁.၂ ကိုအောက်တိုဘာ ၉ ရက် ၂၀၀၆ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Repair ၁.၁ ကိုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
အရင်းအမြစ် PST ဖိုင်ပုံစံကိုအလိုအလျောက်သိရှိရန်အထောက်အပံ့။
ဒေသခံကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Outlook ဗားရှင်းအရ output PST ဖိုင်ပုံစံကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ရန်အထောက်အပံ့။
ရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်အရဒေသခံကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် PST ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
DataNumen Outlook Repair 1.0 ကိုနိုဝင်ဘာလ 19, 2005 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ပျက်စီးနေသော Microsoft Outlook ၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်တွဲ (.pst) ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခု။
ပြန်လည်ယူပါ lost Outlook ဒေတာ, အီးမေးလ်များနှင့်ကုန်ကြမ်း disk များသို့မဟုတ် drives တွေကိုကနေအခြားအရာဝတ္ထု
ပျက်စီးနေသော Microsoft Word စာရွက်စာတမ်းများ (.doc နှင့် .docx files) ကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ ပြန်လည်ရယူပါ။
ပျက်စီးနေသော (သို့) ပျက်စီးနေသော Microsoft Excel xls, xlw နှင့် xlsx ဖိုင်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။